Shirkada ACWA Power oo ku guuleysatey wareega hore ee mashruuca tamarta korontaf... - Idman News
Shirkada ACWA Power oo ku guuleysatey wareega hore ee mashruuca tamarta korontaf…
Shirkada ACWA Power oo ku guuleysatey wareega hore ee mashruuca tamarta korontafa ee qoraxda laga dhalinayo.
Hawlaha ay wada qabtaan dawlada iyo shirkada gaarka loo leeyahay ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano (PPP) ayaa gudiga Itoobiyaha u qaabilsan arimahaas ayaa maanta ansixiyey wajigii koowaad ee mashruuc laga dhalinayo tamarta Qoraxda, kaasi oo ay siiyeen shirkadii ku guuleysatey.
Gudiga ayaa u ansixiyey shirkada ku guuleystey $300 oo milyanoo doolar,waxaana laga hirgaliyana Gad iyo Dicheto kuwaasi oo laga fulin doono mashruuc gaar loo leeyahay oo tamarta qoraxda ah kaasi oo isku geyn dhalin doona tamar dhan 250 MW, waxaaney labada meelood ee laga fulin doonaa ku yaalaan deegaanda Soomaalida iyo Canfart, kuwaas oo iyaguna maanta kulan aan caadi ahayn ka yeelanaya arintaas.
12 shirkadood oo ku guuleystey in lagu soo saaro liiska xulashada, todoba ka mid ah waxa ay booqdeen meelaha hawsha laga fulinayo waxaaney maanta xaadir kuahaayeen goobta lagu bixinaayey qandaraaska, shan ka mid ahna waxa ay gudbiyeen qorshe hawloodkoodii.
Shanta shirkadooda ee soo hadhey qandaraas qaatayaasha waxaa ku guuleystey oo oo arimaha farmasada qabanaya shirkada Sucuudiga fadhigeedu yahay oo la yidhaahdo ACWA POWER.
Wasaarada maaliyada ayaa sheegtey in qiimaha canshuurta uu ugu jaban yahay tamarta laga dhaliyo qoraxda.
Wararka Maqal iyo muuqaal (TV, AUDIO, VIDEO)
Trump:Ilahay baa ii doortey in aan hawshan qabto oo aan ka hor tago Shiinaha . …
DAWLADA SOMALIYA OO XIDHIIDHKII U JARTEY WADANKA GINNI
Previous Previous post: Maxay tahay dacwadda ka dhanka ah Sharukh Khan ee loo gudbiyay maxkamadda sare…
Next Next post: Madaxweynaha Puntland Ayaa Dib u Soo Laabtay Ka Dib Safaro Uu Dalka Dibadiisa Ugu Maqnaa
Somali News – Wararka Soomaaliya (11,060)
Sports – Cayaaraha (2,004)
Wararka Maqal iyo muuqaal (TV, AUDIO, VIDEO) (21,907)